Manamora ny fitantanana ny fanananao ny Channel Manager
Amin'ny maha-mpampiantrano anao, iray amin'ireo zavatra manan-danja tokony hataonao, ny fampitomboana ny fiparitahan'ny fanananao. Arakaraka ny haben'ny fampirantiana no ahatongavan'ny mpihaino marobe, ary amin'izany dia hitombo ny fahafaha-mitombo ny taha. Miakatra ny tombam-bidin'ny trano misy tombony bebe kokoa. Na izany aza, ny fitomboan'ny famoahana dia mety mitaky fotoana sy hery be dia be mba hahazoana antoka fa hitazona ny toetr'andro ary tsy misy ny famoahana boky be loatra.
Ny overbooking dia mety hanimba ny lazanao ary hahatonga ny vahiny ho avy hanana eritreritra hafa amin'ny fampiasana ny serivisinao amin'ny fotoana hafa. Noho izany dia mila drafitra voarindra ianao handresena ny famandrihana be loatra sy hampihenana ireo sorisory tsy ilaina.
Io no ilana mpitantana fantsona. Ny mpitantana fantsona tsara dia manampy amin'ny fampifanarahana ny taha. Azonao atao ihany koa ny mahazo tombony bebe kokoa hampitomboana ny fipoahana, ary miaraka amin'izay koa hampihena ny mety ho famandrihana be loatra. Na izany aza, tena ilaina ny fahalalana ny fomba sy ny fotoana tokony hampiasanao mpitantana fantsona.
Mety efa naheno tantaran'ireo mpampiantrano ianao izay tsy mifanaraka amin'ny fantsom-pahitalavitra tanteraka ny salan'isa, na ny toerana misy azy ireo dia atosika any amin'ny OTA im-betsaka isan'andro fotsiny, ka miteraka famandrihana be loatra.
Ny vahaolana amin'ny olana amin'ny be loatra dia ny fampiasana mpitantana fantsona izay misy endrika sy endrika samihafa. Ny sasany amin'izy ireo dia hanolotra fampidirana API 2-teratany zanatany, raha toa kosa ny mpitantana fantsona hafa hampiasa fampitahana matetika iCals.
Ny rohy iCal dia mamela ny rafitra hanome vaovao manodidina ny hetsika izay azo ampidirina amin'ny rindranasa hafa na rindrambaiko hafa. Google Calendar, ohatra, manome rohy iCal ho an'ny hetsika tafiditra ao. Toy izany koa, ny rindrambaiko mandray vahiny dia afaka mifampiresaka amin'ny ambaratonga voafetra amin'ny alàlan'ny rohy iCal amin'ny alàlan'ny fifampiresahana rehefa tsy misy efitrano na trano intsony.
Na izany aza, miankina matetika amin'ny rafitry ny fandraisana ny matetika. Ny ankamaroan'ny OTA dia tsy misarika ny fanavaozana iCal mihoatra ny imbetsaka isan'andro. Izany dia mampitombo ny mety hisian'ny famandrihana roa sosona. Ankoatr'izay, iCals dia tsy mamela ny fampifanarahana ny tahan'ny eo amin'ny PMS / Channel Manager sy ireo sehatra misy ny lisitra. Midika izany fa mbola mila manova ny tahan'ny tanana amin'ny tranonkala kendrena ianao isaky ny manova ny rafitra famandrihanao foibe.
Ahoana no ahafahan'ny Zeevou's Channel Manager manampy?
Ny fampidirana API no fototry ny fifandraisan'ny rindrambaiko fandraisam-bahiny. Avelan'izy ireo halefa amin'ny fotoana tena izy ireo ny tahan'ny roa sy ny fahafaha-manana (mety maharitra minitra vitsy ny taham-pahavitrihana), ka hiantohana ny volanao raha vantany vao manova ianao.
Ankoatr'izay, ny fampidirana API dia mampihena be ny habetsaky ny ezaka ilaina mba hiantohana ny tahan'ny fitoviana na hampiakarana ny vidiny amin'ny alàlan'ny fantsona mba handrakofana ny vaomiera misy azy ireo. Mandritra izany fotoana izany dia manampy amin'ny fisorohana ny lesoka ataon'ny olombelona mandritra ny fidiran'ny angon-drakitra amin'ny tranokala marobe.
Zeevou's Channel Manager dia manolotra fampidirana API 2-lalana miaraka amin'i fantsona 200 mahery. Izany dia ahafahantsika manosika ny tahan'ny sy ny fisian'ny tena izy amin'ny fotoana fohy, mampihena ny vitan'ny famoahana boky be loatra. Noho izany ianao dia afaka mahita mora foana ny fisian'ny fanananao atsy ho atsy ary manao ny sisa amin'ny asa amin'ny saina mora foana.
Raha vantany vao vita ny famandrihana amin'ny iray amin'ireo tranokala lisitra na OTA izay ampifandraisin'i Zeevou, dia mihodina mankany Zeevou izy io. Raha vantany vao tonga ny famandrihana Zeevou, mailaka iray mety hateraka ho an'ny vahiny hanangana an'i Zeevou fanodinana famandrihana mandeha ho azy izay manamora ny fanodinana ireo famandrihana na inona na inona loharano.
Rehefa mametraka an-tsarintany ny drafitry ny tahan'ny unitanao amin'ny fantsona ianao dia afaka manampy vola voafaritra na isan-jato voafaritra amin'ny fantsona tsirairay. Io dia ahafahanao mampiditra marika amin'ny vidinao izay mandrakotra ny kaomisionan'ny fantsona. Na izany aza, tokony ho mailo ianao amin'ny fehezan-dalàna momba ny saritaka rehetra izay mety mihatra amin'ny fifanarahana nataonao tamin'ny OTA isan-karazany (miankina amin'ny firenena misy ny fanananao sy ny feon'ny OTA ihany izany).
Zeevou dia tsy mampifangaro sary na atiny hafa amin'ny OTA. Midika izany fa mila mamorona ny lisitra ianao amin'ny tranonkala tianao hampifandraisina sy amin'ny Zeevou misaraka, ary ampifandraiso avy eo. Amin'ny lafiny mazava, raha mifindra mankany Zeevou ianao avy amin'ny mpitantana fantsona hafa, dia azonao atao ny mitazona ny lisitry ny lisitra misy anao rehetra ary manantona izany hatrany amin'i Zeevou raha vantany vao natanisao ireo fananana ao amin'ny rafitray.
Ny fampiasana ny mpitantana fantsona Zeevou dia afaka mampitombo ny fahaizany. Ireo olona mitady ny fanofana ny fanananao dia hanana fahitana mazava momba ny satan'ny sy ny fisiany. Izy io koa, dia mamonjy fotoana be dia be amin'ny fifampiraharahana amin'ireo mety ho vahiny izay tsy mahatsikaritra fa tsy misy intsony ny fanananao. Ka tohizo ary mangataka demo!